BUDDHIST TERMS' Dictionary: EIGHT PRECEPTS INCORPORATING RIGHT LIVELIHOOD - အာဇိဝဋ္ဌမကသီလ
EIGHT PRECEPTS INCORPORATING RIGHT LIVELIHOOD - အာဇိဝဋ္ဌမကသီလ
EIGHT PRECEPTS INCORPORATING RIGHT LIVELIHOOD Ᾱjῑvaṭṭhamakasῑla
အာဇိဝဋ္ဌမကသီလ - စင်ကြယ်သော အသက်မွေးမှုလျှင် ရှစ်ခုမြောက်သော သီလ။
မတရားနည်းဖြင့် ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေ အသက်မွေးမှုကို မိစ္ဆာဇီဝ ဟုခေါ်သည်။ ထိုမှ ရှောင်ကြဉ်ကာ တရားသဖြင့် ပစ္စည်းဥစ္စာရအောင် ရှာဖွေအသက်မွေးမှုကို သမ္မာအာဇီဝ ဟု ခေါ်သည်။ ထို သမ္မာအာဇီဝကို ရှစ်ခုမြောက်ထား၍ ကာယဒုစရိုက် ၃-ပါး၊ ၀စီဒုစရိုက် ၄-ပါး၊ မိစ္ဆာဇီဝ တို့မှ ရှောင်ကြဉ်သော သီလ ဖြစ်သည်။
Precepts in which right livelihood is included as the eighth
Makingalivelihood by unfair means is Micchᾱjῑva. Abstaining from micchajiva and earningaliving by lawful means is right livelihood, Sammᾱᾱjiva. Abstention from the three physical misdeeds and four verbal offences, together with right livelihood, Sammᾱᾱjiva, as the eighth of the eight precepts is Ᾱjivaṭṭhamaka Sila.